बाबुराम भट्टराई भन्छन्, 'लौरो उभ्याएरै भएपनि वैकल्पिक सरकार दिऊँ'
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लौरो उभ्याएर भएपनि वैकल्पिक सरकार दिनका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
संसद, संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा आजको मुख्य कार्यभार रहेको भन्दै भट्टराईले जे गरेर यी सबैको रक्षा हुन्छ, त्यसै गरेर अब अगाडि बढ्नका लागि सबै विपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् ।
वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि सबैले आवश्यक त्याग र बलिदान गर्न पनि भट्टराईले आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'लौरो उभ्याएर भएपनि ७६(५) को वैकल्पिक सरकार दिऊँ ! आजै गरौँ, अहिल्यै गरौँ !'
भट्टराईले तत्काल वैकल्पिक सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले विपि, पुष्पलालदेखि अहिलेको पुस्तासम्मले लडेर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नभए इतिहासले धिक्कार्ने बताए ।
संसद,संविधान,लोकतन्त्रको रक्षा आजको अहं प्रश्न हो!जे गरेर रक्षा हुन्छ त्यही गरौं।सबैले आवस्यक त्याग/बलिदान गरौं।लौरो उभ्याएर भए पनि७६(५)को वैकल्पिक सरकार दिऊॅ!आजै गरौं,अहिल्यै गरौं! बिपी/पिएलदेखि हाम्रो पुस्तासम्मले लडेर ल्याएको संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा नभए इतिहासले धिक्कार्नेछ!
प्रकाशित मिति : जेठ ७, २०७८ शुक्रबार १०:१७:४१,